, वजन बोसो भंडार को हटाउनु इच्छा खाना पूरा नगर्दा सम्म, अर्को एक आहार मानिसहरूलाई धक्का। तर भोक बोसो को हटाउनु गर्दैन, र मात्र समस्या exacerbate: शरीर को जैव रसायन धेरै जटिल छ, र यो कि सरल थिए भने, कुनै बोसो मान्छे त्यहाँ हुनेछ। सामान्यतया, मोटोपना को कारण कार्बोहाइड्रेट मा जोर, अत्यधिक ताप सेवन भनिन्छ।
प्रयोग नगरिएको कार्बोहाइड्रेट स्टक मा बोसो मा सञ्चय छन्। शेयर, बढ्दै छ यसको मालिक को सबै महान समस्याहरूको निम्त्याउने: संख्या सही अगाडि deteriorates। के गर्ने? अब लोकप्रिय समीक्षा: "द Kremlin आहार विचित्रताहरू गर्छ" - थप र थप अनुयायीहरूलाई आकर्षित गर्छ। सबै पछि, चमत्कार आहार को सबै भन्दा dieters Herculean प्रयास आवश्यक र सबै को पहिलो यो सामान्य आहार, को मा बहिष्कृत छ जसमा कटौती बुझाउँछ "Kremlin अस्पताल।"
कार्बोहाइड्रेट हटाउन र बोसो Kremlin आहार आवश्यक बाल्न शरीर बल। उनको व्यञ्जनहरु धेरै सरल छन्। यो भोक pangs दिनले यस्तो तरिकाले निर्माण गरिएको छ। दैनिक मेनु, पर्याप्त बाक्लो छ प्रोटिनको पूर्ण रूपमा: मासु, माछा, कुखुराको अन्डा, घरेलु पनिर - यो प्रोटिन उत्पादन वस्तुतः प्रतिबन्ध बिना शुरू छन्। यो मांसपेशी आफ्नो मात्रा कम गर्न आदेश दिन मस्तिष्क जबरजस्ती छैन भोक छ। "वजन हानि छैन मांसपेशी र बोसो कारण" - एक समीक्षा Kremlin आहार उचित योग्य।
तर, यो प्रोटिन पोषण कार्यक्रम को अनुयायीहरूलाई अक्सर स्वास्थ्य को लागि खराब छ जो गल्ती बनाउन। कुनै पनि रकम मा प्रोटीन, Kremlin आहार prescribes अन्य उत्पादनहरु कडाई अंक मा कार्बोहाइड्रेट सामग्री विचार चयन गर्न - प्रति उत्पादन 100 ग्राम ग्राम।
यसलाई अनाज, आलु, पेस्ट्री, पास्ता, मिठाई दिन सजिलो छ, तर पनि त्यहाँ तरकारी र फल कम आवश्यक - सामान्यतया वजन खोने सिफारिस छ। सख्त आहार भित्र एक थप वा कम सन्तुलित आहार को सख्त उत्सव लागि ध्यान दिएर अनुगमन गर्नुपर्छ सन्तुलनमा - प्रति दिन अंक कुनै थप 40 भन्दा पहिलो 2-3 सप्ताह समयमा, र कुनै अधिक 60 - भविष्यमा। अंक, या अंक, एक लामो समय को लागि विकास र विशेष तालिकामा समेकित।
समीक्षा त्यहाँ सारांश: द Kremlin आहार मेनुमा कार्बोहाइड्रेट एकाइहरु गणना को एक प्रणाली आवश्यक छ, तर व्यस्त मान्छे को शक्ति बाहिर छ। तिनीहरू केवल सबै कार्बोहाइड्रेट हटाइएको र केवल प्रोटिन खान - मासु र माछा। यो स्वास्थ्य जोखिम कारक हो।
सन्तुलित स्वस्थ आहार कार्बोहाइड्रेट लागि आवश्यक हुन्छन् र4को प्रोटिन गर्न अनुपात हुनुपर्छ: 1, र Kremlin आहार मौलिक शरीर metabolize बोसो जबरजस्ती गर्न अनुपात फेरबदल। शरीर मा Kremlin आहार sokrushayusche प्रभाव, स्वास्थ्य undermining: वहाँ एक विपरीत र समीक्षा छ किन कि छ।
यो सबै शरीर प्रणाली को परिचालन को खर्च मा तीव्र वजन उद्देश्य छ। nutritionists सबै दुनिया भर चेतावनी रूपमा आघात नै कुनै पनि प्रभाव, केवल छोटो समय सहनु गर्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ, चिकित्सकहरु एक समझौता गर्न सल्लाह गर्दै छन्: Kremlin आहार पालना गर्न भने, यो केवल एक धेरै छोटो समय छ - छैन थप एक हप्ता भन्दा। यसलाई ब्रेक पछि पाठ्यक्रम बारम्बार राम्रो छ, तर कुनै पनि मामला मा शक्ति को जग बनाउन छैन: स्वास्थ्य क्षति टाढा वजन को प्रभाव बढी छ।
म कसरी लामो वजन गर्न चलान गर्नुपर्छ? कार्यक्रम फिटनेस कसरत बनाउन
गुमाउन Kornelia साधारण जस्तै वजन: एक अद्वितीय प्रविधी को रहस्य
सकारात्मक र नकारात्मक मूल्यांकन ग्रीन Slimming कफी - panacea वा अर्को "बबल"?
बोसो जल लागि बल प्रशिक्षण। माथि चित्रकला पुरुष र महिला लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम
सरल तर प्रभावकारी स्याउ आहार: समीक्षा र सिफारिसहरू
"Swissotel सोची Kamelia Resort" 5: * समीक्षा, फोटो, वर्णन, सम्पर्क
मूल्य के हो र यसको साथ के गर्ने?
मेंहदी रसीला कपाल
HF-2: पुस्तिका। भारी ट्यांक केभी-2, सुझाव, बलियो र कमजोर अंक को एक सिंहावलोकन
गर्भावस्था को ट्याब्लेटको: गर्भपतन को आधुनिक दृश्य
कसरी मान्छे भूल
त्यो स्मारक मा लेखिएको भालु
वर्णन, निर्माता, सिफारिसहरू र समीक्षा: Cahors कसरी चयन गर्न